भाइरल जोडी विनोद र अनितालाई भाईटिका लगाउन अस्पतालमै आईपुगे उनका दिदीबहीनीहरु, अस्पतालमै भयो रुवाबासी (भिडियो हेर्नुहोस) – AB Sansar
भाइरल जोडी विनोद र अनितालाई भाईटिका लगाउन अस्पतालमै आईपुगे उनका दिदीबहीनीहरु, अस्पतालमै भयो रुवाबासी (भिडियो हेर्नुहोस)
November 17, 2020 adminLeaveaComment on भाइरल जोडी विनोद र अनितालाई भाईटिका लगाउन अस्पतालमै आईपुगे उनका दिदीबहीनीहरु, अस्पतालमै भयो रुवाबासी (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं । अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् । यो जोडी नेपालकै नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टिकटकबाट भाइरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मार्मिक र आत्मियताले भरिएको छ । पछिल्लो समय टिकटकसंगै युुटट्युबमा पनि यो जोडीलाई देख्न सकिन्छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
बुहारीको स्याहार गर्दै अस्पतालमा बसिरहेको भाईलाई टिका लगाईदिन उनका दिदीबहीनीहरु अस्पतालमै आएका थिए । विनोदका दिदीहरुले विनोदसंग जब बुहारी अनितालाई पनि भाईदिका लगाईदिए तब अस्पतालमा रुवाबासी भयो । बुहारीलाई यस्तो अवस्थामा टिका लगाउनु पर्दा उनीहरुले विगत सम्झिंदै भक्कानिंदै रोए । अमाजुहरुलाई रोएको देखेर अनिता पनि रोईन् । ताजा खबर बाट ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
खुसीको खबर : नेपाल मा आज एकै दिन यति धेरै संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किए ! हेर्नुहोस् विवरण ।
आज ह्वात्तै सुनको मूल्य घटेपछि, बजारमा सुन किन्ने हरुको घुइँचो ।
भर्खरै आयो यस्तो दु:खद खबर ! मनमा दया भए Rip लेख्नुहोला !
धनगढीको अस्पतालमा बैतडीका कलौनी ५ दिनदेखि अचेत, भिरबाट लडेर कि हत्या प्रयास ?